လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #255
အားလုံးက default, များပြား payware လေယာဉ်ဒီတော့အပေါ်စစ်ဆေးမှုများစာရင်းများ, ရည်ညွှန်းအမြန်နှုန်းနှင့်တူသော, စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးရှိသည်။ ငါသောမတ်စ်ရုသသည် A330 / 340 နဲ့တခြားလေယာဉ်များအတွက်ဤတွေ့ရှိရန်လကြာကြိုးစားနေပေမယ့်နေဆဲဘာမျှတာပါ။ ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှတွေ့မှဘယ်မှာသိကြပါသလဲ?
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #256
ကောင်းပြီ, ငါမကြာခဏခရုဇ်မြန်နှုန်း / အမြင့်ဘို့ Wikipedia ကိုအသုံးပြုပါ။
အဘယ်အရာကိုလည်းစစ်ဆေး FSX တိကျမှုရှိလေ့ရှိတယ်အပေါ်ဘာအဖြစ်, Wikipedia ဆန့်ကျင် max ကိုလောင်စာ / စုစုပေါင်း-အလေးချိန်အဘို့အလို့ပြောပါတယ်။ IF FSX အလွန်လွယ်ကူသောပြင်ဆင်ချက်ရဲ့တူညီတဲ့မဟုတ်ပါဘူး
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #257
အဓိကပြဿနာနှင့်တစ်ဦးနာကျင်မှု ..... သင် vne, ဒါမှမဟုတ်တင်းကုပ်မြန်နှုန်းချဉ်းကပ်သောအခါပျံသန်းသောအခါ, တို့နှငျ့ဆတိပ်အနီရောင်ရရှိသွားတဲ့, ဒီဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ် TR A330 / 340 ပေါ်မှာ။ ကြောင့်ကြောင့်မှကျွန်မအရာ၏တင်းကုပ်မြန်နှုန်းဈသာခန့်မှန်းနိုင်ပြီး, ဘယ်မှာမျှသဲလွန်စရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါရှာတွေ့တစ်ခုတည်းတဦးတည်းသောသတင်းအချက်အလက်မရပေးခြင်းမဟုတ်ပါအဆိုပါစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း။
ငါ CLS A340 စာရွက်စာတမ်းများထုတ်တူးဖို့နိုင်ခဲ့သည် ... ဒါပေမယ့်ငါအလေးအနက်ထားကြောင်း TR A340 နှင့်အတူကဲ့သို့တူညီသောရဲ့သံသယ။
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #258
ကောင်းစွာရိုးသားစွာ ... ငါတကငှက်အဘို့ရှာတှေ့နိုငျဘယ်သို့သောအားဖြင့်သွားပါ .....
747 (ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်) လိုပဲငါတောင်တက်ထွက်မှာ 245K အောက်မှာ ၂၄၅ လုပ်ရတယ်၊ ထို့နောက် IAS ရှိမည်သည့် cruise speed သို့မဆို autothrottle ကိုသတ်မှတ်သည်။ နောက်ဆုံးချဉ်းကပ်နည်းသည် ၁၃၅ ias တွင်ရှိသည်။
တင်းကုပ်မြန်နှုန်းထွက်ရှာတွေ့မှတကယ်လွယ်ကူပြီးပါ! က aircraft.cfg ဖိုင်ထဲမှာဖွင့်
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #259
ဒါကြောင့်တွေ့သည် .... ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမလမ်းကဒီတိကျသည်။
အပြည့်အဝခတ်ထားတဲ့အဲယားဘတ်စ် a120-340 များအတွက်မြန်နှုန်း-500 kts ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထား?
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #260
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #261
ဒါဟာတာရှည်ရိုက်ချက်င်သင်မူကား ... အဲယားဘတ်စ်ကိုင်ရတဲ့စမ်းကြည့်ပါအရာကိုသိ ... သူတို့သည်သင့်ကိုထုတ်ကူညီပါမယ်ဆိုပါကကြည့်ရှု!
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #306
အဆိုပါ You Tube န်းကျင်အချို့ရှာဖွေရေးပြီးနောက်ကျွန်မအချို့သောအရာထွက်ရှာနိုင်ခဲ့တယ် ..
A340-600, ချဉ်းကပ်မှုမြန်နှုန်း 160-170 kts, တဦးတည်းကြီးတွေ woow ဖြစ်သောရုံ 160 kts အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခြင်းတင်းကုပ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူ .... အံ့သြစရာမဟုတ်ပါငါသည်ဤအရာဆင်းသက်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောခက်ခဲအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သေးငယ် A340s ... ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးမှန်းဆ, 5-10 နိမ့်မြန်နှုန်း kts, ဒါပေမယ့်နေဆဲအတော်လေးအစာရှောင်ခြင်း။
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #308
ဖော်ပြချက်: A340-500,600 ဆိုက်အား FCOM ထံမှ
လေယာဉ်စာရွက်စာတမ်းများ3နှစ်ပေါင်း5months ago #312
ကျေးဇူးတင်ပါသည်တွေအများကြီးယောက်ျားသည်။ ငါကပေးဆပ်မယ့်လမ်းမရှိသောကြောင့်ထို site ကနေရနိုင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတစ်နေရာရာအခြားသူကထွက်တူးဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဦးတည်းကြီးတွေ, ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကား။ ငါမှာအားလုံးဤစာရွက်စာတမ်းသတိထားမဟုတ်ခဲ့ပေ။